GoodCraft | သင့်ရဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုတည်ဆောက် | APK ကို Android အတွက် Download
GoodCraft - သင့်သင်တို့သည်လောကီနိုင်ငံချင်သောလမ်း Build
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » GoodCraft - သင့်သင်တို့သည်လောကီနိုင်ငံချင်သောလမ်း Build
ဒီတော့ GoodCraft ကဘာလဲ? သင်မြေမြှုပ်မိုင်းများကဲ့သို့ဂိမ်းကြိုက်နှစ်သက်အထူးသဖြင့်လျှင်, အပြင်မတိုင်မီဒီ app ကိုဖြတ်ပြီးလာကြပြီပေလိမ့်မည်။ ဤသည် Adventures နှင့်အပြင်အဆင်တွေအများကြီးနဲ့အကြီးအပိတ်ပင်တားဆီးမှု-based ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျ, ထိုလုပ်ကွက်ကိုဖကျြဆီးအမျိုးမျိုးသောအရင်းအမြစ်များကိုစုဆောင်းနေဖြင့်ဆက်လက်ရှင်သန်ပြီးကောင်းတဲ့အဆောက်အဦကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ကအားလုံးကို devices များအတွက်ချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်လုပ်သည်ထိုကဲ့သို့သောကြောင်းမြင့်မားတဲ့ resolution နဲ့အကောင်းဆုံးကို optimization ၏ဂိမ်းဝါကြွား။ အဲဒီမှာ 10 တိရိစ္ဆာန်များကျော်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဂိမ်းထိန်းချုပ်မှု thoughtfully နှင့်တော်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အခမဲ့အန်းဒရွိုက်ဂိမ်းလည်းအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောက iOS ဗားရှင်းရှိပါတယ်။ ရန်သူများ၏ရှင်းလင်းသောတည်းခိုနေစဉ်ယာဉ်တ္ထုနှင့်အရင်းအမြစ်များနှင့်အတူလုပ်ကွက်လောကီသားတို့သည်လေ့လာစူးစမ်းနိုင်ပါတယ်။
အဆင်ပြေဂိမ်းထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့ user-ဖော်ရွေဂိမ်းကစားပွဲတစ်ခုသော့ချက် feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောဂရပ်ဖစ်နှင့်မျိုးစုံဆောက်လုပ်ရေးတ္ထုနှင့်အတူလုပ်ကွက်၏ကြီးမားသောအမျိုးမျိုးကိုတွေ့လိမ့်မည်။ high-resolution ကိုဂရပ်ဖစ်ဒီဂိမ်းကိုကစားရန်အပျြောအပါးပါစေ။ သင်သည်သင်၏ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်လုပ်နေစဉ်, မသာသငျသညျ tools များနှင့်စားနပ်ရိက္ခာကိုရှာဖွေဖို့ရှိသည်ပါဘူး, သင်တို့သည်လည်းရန်သူတို့ကိုမျက်စိထွက်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သူတို့ကိုစစ်တိုက်ခြင်းငှါရှိသည်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်ရန်သူများရိုင်းတိရစ္ဆာန်များဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျ play အဖြစ်သင်ထို့နောက်စတင်သုံးစွဲနိုင်မလုပ်ကွက်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုသော့ဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။
GoodCraft- Started နှင့်ဂိမ်း Play စတဲ့
ဤသည်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု-based ဆောက်လုပ်ရေးဂိမ်းကစားသမားအကြားတစ်ဦးထိခိုက်, Minecraft ၏ပရိသတ်များခဲ့ကြသည်သူတို့သည်အထူးသဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ မှစ. GoodCraft အများကြီးပို features တွေရှိပြီးအသေးစိတ်ပိုပြီးတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်, ဂိမ်းနေ့တိုင်းပိုပြီးကစားသမားရရှိမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအကြောင်းအရာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်3+ များအတွက် rated ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းကို app store ကို၏စွန့်စားမှုကဏ္ဍပါရှိပါတယ်။ သငျသညျ 16 API ကိုနှင့်အထက်ကိုထောက်ပံ့သော Android ထုတ်ကုန်အပေါ်ထဲမှာ install လုပ်နိုင်ပါတယ်။ က Google ကိုအတွက် Store မှာ Play ရရှိနိုင်ပါသည်နေစဉ်, သငျသညျမြားကိုလညျး Apkmonk သို့မဟုတ် Aptoide ကဲ့သို့ app ကိုစတိုးဆိုင်၏တဦးတည်းကိုအသုံးပြုပြီး Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သင်က browser ကို link ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ထို့နောက် APK ကို install လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်မည်သည့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောက Android emulator ကိုသုံးပြီး run နိုင်ပါတယ်။
GoodCraft KnollStudio ကတီထွင်ခဲ့သည်နှင့်အသင်သာသင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်အဆောက်အဦးကျွမ်းကျင်မှုသငျသညျကိုကယျတငျနိုငျဘယ်မှာကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်မှာသောင်တင်နေကြသောစိတ်ကူးအပေါ်အခြေခံသည်။ သငျသညျဖန်တီးမှုနှင့်မလုံလောက်ပါ tools များနှင့်လက်နက်များစုဆောင်းအောင်မြင်စွာအိမ်များဆောက်လုပ်ဖို့လိမ္မာဖြစ်ဖို့ရှိသည်။ သင်ကစားပွဲများတွင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်အဖြစ်, သင်လုပ်ကွက်သစ်အမျိုးအစားများကိုဖြတ်ပြီးလာပါလိမ့်မယ်။ သင်အလိုရှိအဖြစ်သင်သည်သင်၏ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သငျသညျနေရာသစ်မှခရီးသွားစဉ်အစားအစာ, tools များနှင့်ထို့ထက် ပို. ရှာဖွေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အခွင့်အလမ်းတွေကိုအသစ်သောအင်္ဂါရပ်များကိုသင်တိုးတက်မှုအဖြစ်ဖွင့်လာမယ့်စောင့်ရှောက်သကဲ့သို့သင်တို့ဂိမ်းနှင့်အတူပျင်းမည်မဟုတ်ပါဖြစ်ကြသည်။
GoodCraft မှာလေးယောက်တစ်ဦးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ် Google Play စတိုးအဆိုပါအသုံးပြုသူအများဆုံးဂိမ်းနှင့်အတူပျော်ရွှင်ခဲ့ကြဆိုလိုသည်။ တစ်ခုပြီးသားလူကြိုက်များတဲ့ဆောင်ပုဒ်ယူခြင်း, developer များဂိမ်းကိုဖန်တီးပြုလုပ်ကစားရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်ပျော်စရာကြောင်းသေချာစေရန်တဦးတည်းခြေလှမ်းရှေ့ဆက်ကြပြီ။ နောက်ခံအယူအဆအခြားဘလောက်ဂိမ်းအဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်သော်လည်းနောက်ထပ် features တွေကြောင့်သူ့ရဲ့ထူးခြားမှုပေးပါ။